WeChat? Tsy Ao Rosia. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2017 14:35 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Magyar, English, عربي, 日本語, Español, 简体中文, Italiano, English
Sary: Sinchen Lin / Flickr / CC 2.0
Tamin'ny 4 Mey, nakaton'ny mpanao fanampenam-bava federaly ao Rosia ny WeChat, fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny finday lehibe indrindra ao Shina. Araka ny filazan'ny Roskomnadzor, tsy nahavita nisoratra anarana tao amin'ny governemanta federaly ho “mpandrindra ny fanapariahana vaovao” ny WeChat, izay takiana amin'ireo tranonkala sy tolotra antserasera isan-karazany noho ny antony ara-teknika .
Nanomboka tamin'ny taona 2014, nitantana lisitra misy ireo tolotra aterineto izay “mandrindra ny fanapariahana vaovao” ny governemanta Rosiana. Ankehitriny, ahitana tranonkala tahaka ny Vkontakte sy Odnoklassniki (tambajotra sosilay roa malaza indrindra ao Rosia), ny tabilaon-tsary 2ch.hk, ny mailaky ny mpanjifa Mail.ru, sy tolotra am-polony hafa izany lisitra izany.
Nampidirina ny lisitra taorian'ny fandaniana ny lalàna federaly izay mitaky amin'ireo tranonkala mba hitahiry ny tahirimben'ny mpiserasera Rosiana («vaovao momba ny fahatongavana, famindrana, fandefasana sy ny fizotran'ny dingana amin'ny tahirim-peo, lahatsoratra nosoratana, sary, feo sy karazana hetsika hafa”) ary mamela izany ho azon'ny manampahefana Rosiana idirana. Afaka misoroka ny voka-dratsy amin'ny fanavahana izany vaovao izany ny tranonkala amin'ny alalan'ny fanomezana ny manampahefana Rosiana hiditra hatrany sy tsy misy olana amin'ny fivezivezen'ny tahiry manontolon'izy ireo.
Araka ny filazan'ny mpanaramaso ny zo aterineto Roskomsvoboda, efa nanakatona adiresy IP roapolo mahery sahady izay mifandray amin'ny sehatra sy ny tolotra Tencent, mpanamboatra ny WeChat ireo Rosiana mpanao fanampenam-bava.
Ny fihetsika noraisina tamin'ny fampiharana fandefasan-kafatra lehibe indrindra avy ao Shina no farany indrindra amin'ireo famoretana atao ankehitriny amin'ny fandefasan-kafatra, anisan'izany ny fanapahan-kevitra hanakatona ny BlackBerry Messenger, Naver's Line sy Vchat – noho ny tsy fisoratana anarana ihany koa tao Moskoa. Tamin'ny volana Aprily, taorian'ny herinandron'ny fitokonana nokarakarain'ireo mpamily kamiao ho fanoherana ny haban-dalàna federaly, nakaton'ny Roskomnadzor ny Zello, fampiharana tsindrio-raha-hiresaka malaza teo amin'ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana.
Niresaka tamin'ny RuNet Echo momba ny fanakatonana ny WeChat tao Rosia i Artem Kozlyuk, filohan'ny Roskomsvoboda:
Ao Rosia, tsy ny WeChat sy Line no fandefasan-kafatra eo no eo malaza indrindra, saingy na izany aza, ampiasain'ny olom-pirenentsika mba hifandraisana amin'ny havana, namana sy mpiara miasa ao Azia Afovoany sy Azia Atsimo-Atsinanana ireo, izay malaza ao ireo fandefasan-kafatra ireo. Satria fantatsika ankehitriny fa tsy afaka harahin'ny fikambanan'ny mpitsikilo ao Rosia maso izany fandefasan-kafatra izany, mino aho fa hitombo ao Rosia ny fitiavana azy ireo (fandefasan-kafatra).
Tao amin'ny media sosialy, nahitana vazivazy malefaka hatramin'ny firaisankina ny fanehoan-kevitra momba ny fanakatonana ny WeChat.
Nakaton'ny Roskomnadzor ny WeChat. Ahoana no hiresahan'i Potinina amin'i Xi izany? Mandefa lahatsoratra sa inona?
Tao amin'ny Vkontakte, mpisera iray naneho hevitra tao amin'ny pejin'ny Roskomsvoboda:
[WeChat] tafavoaka velona teo ambanin'ny sivan'ny PRC, saingy tsy ho hisy intsony ao Rosia? Misy dikany izany? haha
Mpisera Vkontakte iray nanoratra hoe
Ho tafavoaka velona amin'ny sakana isika. Ny zava-dehibe dia tsy niara-niasa tamin'ny manampahefanantsika izy ireo ary tsy nanatanteraka ny fitakian'izy ireo. Ary hahatakatra ny fomba hialàna amin'ny sakana isika.
Na dia azo atao amin'ny alalan'ny fitaovana “tsy itononana anarana” tahaka ny tolotra Tor sy VPN aza ny fidirana amin'ny tranonkala voaràra, tamin'ny volana Aprily, namolavola drafitra manakana ny fidirana amin'ny tranonkala manome teknolojian'ny fanivahana ny Roskomnadzor.
Raha afaka miala am-pahombiazana amin'ny fanakatonana ny fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny alalan'ny fisoratana anarana ao amin'ny Roskomnadzor (ohatra, nanjary fampiharana vahiny voalohany nisoratra anarana tany amin'ny governemanta Rosiana ny Threema vao haingana), mihevitra ny Kozlyuk fa ny fanakatonana ny WeChat dia fambara ratsy ho an'ny mpiseran'ny fampiharana fandefasan-kafatra Tandrefana malaza toy ny Whatsapp sy Telegram:
Eny tokoa, midika izany fa tokony ho vonona ny Telegram, Facebook Messenger, Whatsapp, sy ny Viber: afaka na manaiky ny fitakian'ny Roskomnadzor sy ny Sampan-draharaham-piarovana Federaly izy ireo ary manaramaso ny mpiseraseran'izy ireo, na hakatona izy ireo. Mino aho fa hahita ny vokatr'izany isika, atsy ho atsy, na amin'ny volana ho avy.